“Barcelona maku soo biireysaa mise.”. Aqriso SHEEKO dhex martay Messi iyo Paulinho – Gool FM
“Barcelona maku soo biireysaa mise.”. Aqriso SHEEKO dhex martay Messi iyo Paulinho
(Catalonia) 01 Okt 2017. Xiddiga cusub ee Barcelona Paulinho ayaa daaha ka rogay sheeko dhex martay isaga iyo Lionel Messi.
Qisadan ayaa dhacday mar ay ciyaar saaxiitinimo xagaaga wada yeesheen Brazil iyo Argentina markaa uu kabtanka xulka Argentina waydiiyay Paulinho haddii uu kula soo biirayo Barcelona iyo haddii kale.
Wareysi uu laacibka reer Brazil siyay El Periodico de Cataluna ayuu ku yiri sidan:
“Waxaan diyaar u ahaa inaan tuuro laadka xorta ah waxaana wada taagneyn Willian iyo laacibkale, ma xusuusto qofkuu ahaa. Si lama filaan ah Messi ayaan ka arkay gadaasheyda si tartiib tartiib ayuu iigu soo dhawaaday.
“Wuxuu igu yiri ‘Maku soo biireysaa Barcelona mise kuma soo biireysid’ waan soo jeestay waxaana ku iri ‘Haddaad rabto inaad I geyso Barcelona waad ii qaadi kartaa.
“Aad ayaan uga wal walsanaa arrinkaa ciyaarta kaddib waxaan maaliyadaha is dhaafsanay Messi iminkana waan ku faraxsanahay inaan halkan joogo.
Kaddib sheekadii dhex martay isaga iyo Messi, Paulinho ayaa bilaabay duulaan uu uga soo tagayo horyaalka Shiinaha.
“Waxay ahayd fursad naadir ii ah, si cad ayaana ugu sheegay tababare Felipao Scolari, koox kale oo sida Barcelona ah ma aysan imaan lahayn Shiinaha iyadoo aniga i baadi goobaysa.
“Mar uney dhacdaa tan oo kale waxayna ahayd fursad wayn, Nasiib wanaag wuu I fahmay tababaraha, waan ogaa inay caddaalad darro noqon doonto haddii ay kooxda iga hor istaagaan inaan ku biiro Barcelona.”.
HORDHAC: Barcelona Vs Las Palmas
Muxuu Pep Guardiola ka yiri guushii ay xalay ka gaareen Chelsea??